नायिका जान्ह्वी कपुरमा अचानक जवानी चढेपछि…हेर्नुस केहि हट फोटो फिचरहरु - Nawalpur Dainik
नायिका जान्ह्वी कपुरमा अचानक जवानी चढेपछि…हेर्नुस केहि हट फोटो फिचरहरु
भूत भन्ने बित्तिकै सबैलाई डर नै लाग्ने गर्छ । सानो होस् या ठूलो भूतको नामबाट डराउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । रिलमा देखिने भूतको अवतारले पनि मान्छेलाई उत्तिकै डर दिन्छ जति रियल लाईफमा कुरा गरिने भूत किन नहोस् ।
जाह्नवीले प्रोस्थेटिक्स मेकअपको प्रयोग गरेकी छन् । फिल्ममा सुपर नेचुरल पावर देखाउनका लागि भीएफएक्सको पनि प्रयोग गरिएको छ । फिल्मका निर्देशक हार्दिक मेहताले प्रोस्थेटिक्सपछि दृश्य सुट गर्नका लािग घण्टौ पर्खनु परेको खुलाए । ‘जाह्नवीको लुक्स पास गर्नका लागि उनले १० लुकको टेस्ट दिएकी थिइन्’, हार्दिकले भनेका छन् ।
हार्दिकका अनुसार जाह्नवीले चुँ डे ल जस्तै शारी-रिक हाउभाउ र आवाज फिल्ममा देखाएकी छन् । गत सोमबारमात्र जाह्नवी र राजकुमार रावले फिल्मको विशेष शो राखेका थिए । यो शोमा फिल्मको कलाकार तथा प्राविधिकसहित केही विशेष पाहुना बोलाइएको थियो । फिल्म हेर्न जाह्नवीले आफ्नो सहायकको परिवारलाई पनि बोलाएकी थिइन् ।
जान्वी जवानी चढेपछिका केहि हट तस्बिर अहिले बलिउडमा निकै भाइरल बनिरहेका छन् ।
Prevम दुईवटा श्रीमान राख्छु, दुई श्रीमान् को बीच मा सु’त्न मन छ , के मान्छ त यो समाजले ?
Nextकिन हुन्छ पिनास ? पिनासको घरेलु उपचार जान्नुहोस